မိုးလင်းတဲ့အခါ အနားယူတော့မယ့် လက
လေညင်းလေးတွေထဲ ဝေ့၀ဲရင်း...။ ။ Type rest of the post here
Posted by Myo Chit Thwe at 5/07/2012 08:14:00 PM0comments
ရည်မှန်းချက်၊ ခံယူချက်နဲ့ လျှောက်မည့်လမ်း
Posted by Myo Chit Thwe at 3/29/2012 04:48:00 PM0comments
စည်းဝေးဆွေးနွေးခြင်းငှာ သင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ စံများ
ရဟန်းတို့ စကား နှီးနှောမိခြင်းဖြင့် ပုဂ်္ဂိုလ်ကို “ဆွေးနွေးသင့်သူဟူ၍သော်လည်းကောင်း၊ မဆွေးနွေး
သင့်သူ ဟူ၍သော် လည်းကောင်း” သိအပ်၏။ ရဟန်းတို့ ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည် ပြဿနာကို မေးအပ်သော်
တိုက်ရိုက် ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သော ပြဿနာကို တိုက်ရိုက်အားဖြင့် အကယ်၍ မဖြေဆိုငြားအံ့၊ ဝေဖန်၍
ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်သော ပြဿနာကို ဝေဖန်၍ မဖြေဆိုငြားအံ့၊ တဖန် ပြန်မေး၍ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သော
ပြဿနာကို တဖန် ပြန်မေး၍ မဖြေဆိုငြားအံ့၊ (မဖြေဆိုဘဲ) ထားရမည် ဖြစ်သော ပြဿနာကို
(မဖြေဆိုဘဲ) မထားငြားအံ့၊ ရဟန်းတို့ ဤသို့ ဖြစ်လတ်သော် ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည် မဆွေးနွေးသင့်သော
ပုဂ်္ဂိုလ်မည်၏။ ရဟန်းတို့ ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည် ပြဿနာကို မေးအပ်သော် တိုက်ရိုက် ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်သော
ပြဿနာကို တိုက်ရိုက် အားဖြင့် အကယ်၍ ဖြေဆိုအံ့၊ ဝေဖန်၍ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သော ပြဿနာကို
ဝေဖန်၍ ဖြေဆိုအံ့၊ တဖန် ပြန်မေး၍ ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်သော ပြဿနာကို တဖန် ပြန်မေး၍ ဖြေဆိုအံ့၊
(မဖြေဆိုဘဲ) ထားရမည် ဖြစ်သော ပြဿနာကိုလည်း (မဖြေဆိုဘဲ) ထားအံ့။ ရဟန်းတို့ ဤသို့
ဖြစ်လတ်သော် ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည် ဆွေးနွေးသင့်သော ပုဂ်္ဂိုလ်မည်၏။
ရဟန်းတို့ စကား နှီးနှောမိခြင်းဖြင့် ပုဂ်္ဂိုလ်ကို “ဆွေးနွေးသင့်သူ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မဆွေးနွေး
သင့်သူ ဟူ၍ လည်းကောင်း” သိအပ်၏။ ရဟန်းတို့ ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည် ပြဿနာကို မေးအပ်သော်
အကြောင်း ဟုတ်သည် မဟုတ်သည်၌ အကယ်၍ မတည်အံ့၊ ကြံဆအပ်သော အရာ၌ အကယ်၍
မတည်အံ့၊ သိရမည့် ၀ါဒ၌ အကယ်၍ မတည်အံ့၊ (ဖြေဆိုရမည့်) ကျင့်ဝတ်၌ အကယ်၍ မတည်အံ့၊
ရဟန်းတို့ ဤသို့ ဖြစ်လတ်သော် ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည် မဆွေးနွေးသင့်သော ပုဂ်္ဂိုလ်မည်၏။ ရဟန်းတို့
ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည် ပြဿနာကို မေးအပ်သော် အကြောင်းဟုတ်သည် မဟုတ်သည်၌ အကယ်၍ တည်အံ့၊
ကြံဆအပ်သော အရာ၌ အကယ်၍ တည်အံ့၊ သိရမည့်ဝါဒ၌ အကယ်၍ တည်အံ့၊ (ဖြေဆိုရမည့်)
ကျင့်ဝတ်၌ အကယ်၍ တည်အံ့။ ရဟန်းတို့ ဤသို့ ဖြစ်လတ်သော် ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည် ဆွေးနွေးသင့်သော
ရဟန်းတို့ စကား နှီးနှောမိခြင်းဖြင့် ပုဂ်္ဂိုလ်ကို “ဆွေးနွေး သင့်သူ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မဆွေးနွေး
သင့်သူ ဟူ၍ လည်းကောင်း” သိအပ်၏။ ရဟန်းတို့ ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည် ပြဿနာကို မေးအပ်သော် စကား
တစ်ခုဖြင့် စကားတစ်ခုကို အကယ်၍ ဖုံးကွယ်အံ့ (ဝေ့လည်ချောင်ပတ်လုပ်အံ့)၊ အပြင်စကားကို ဆောင်၍ ပယ်အံ့ (မရောင်ရာ ဆီလူးအံ့)၊ စိတ်ဆိုးခြင်း
အမျက်ထွက်ခြင်း မနှစ်သက်ခြင်းကိုလည်း ထင်စွာပြုအံ့ (မိမိ၏အားနည်းချက်ကိုထိသဖြင့် ဒေါသဖြစ်အံ့)၊ ရဟန်း တို့ ဤသို့ ဖြစ်လတ်သော် ဤပုဂ်္ဂိုလ်
သည် မဆွေးနွေးသင့်သော ပုဂ်္ဂိုလ်မည်၏။ ရဟန်းတို့ ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည် ပြဿနာကို မေးအပ်သော် စကား
တစ်ခုဖြင့် စကားတစ်ခုကို အကယ်၍ မဖုံးကွယ်အံ့၊ အပြင်စကားကို ဆောင်၍ မပယ်အံ့၊ စိတ်ဆိုးခြင်း
အမျက် ထွက်ခြင်း မနှစ်သက်ခြင်း ကိုလည်း ထင်စွာ မပြုအံ့၊ ရဟန်းတို့ ဤသို့ ဖြစ်လတ်သော်
ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည် ဆွေးနွေး သင့်သော ပုဂ်္ဂိုလ်မည်၏။
အကယ်၍ (ပါဠိပါဌ်သားရွတ်ဖတ်၍) လွှမ်းမိုးအံ့ (လူအများနားမလည်နိုင်သော ပညာရပ်အသုံးအနှုံးများသုံးခြင်း)၊ (အကြောင်းပြ၍) ဖိနှိပ်အံ့၊ (မေးသူ့စိတ်၌ သံသယ
ရှိလာအောင်) ပြင်းစွာ ရယ်အံ့ (သရော်သည့်သဘော)၊ အနည်းငယ် ချွတ်ယွင်းသည်ကို အမှားဖမ်းအံ့။ ရဟန်းတို့
ဤသို့ဖြစ်လတ်သော် ဤပုဂ်္ဂိုလ် သည် မဆွေးနွေးသင့်သော ပုဂ်္ဂိုလ် မည်၏။ ရဟန်းတို့ ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည်
ပြဿနာကို မေးအပ်သော် အကယ်၍ (ပါဠိပါဌ်သား ရွတ်ဖတ်၍) မလွှမ်းမိုးအံ့၊ (အကြောင်းပြ၍)
မဖိနှိပ်အံ့၊ (မေးသူ့စိတ်၌ သံသယ ရှိလာအောင်) ပြင်းစွာ မရယ်အံ့၊ အနည်းငယ် ချွတ်ယွင်းသည်ကို
အမှား မဖမ်းအံ့။ ရဟန်းတို့ ဤသို့ ဖြစ်လတ် သော် ဤပုဂ်္ဂိုလ်သည် ဆွေးနွေးသင့်သော ပုဂ်္ဂိုလ်မည်၏။
Posted by Myo Chit Thwe at 3/20/2012 06:10:00 PM0comments
Labels: ဗုဒ္ဓ၏ အကြံပြုချက်များ
Posted by Myo Chit Thwe at 3/19/2012 01:56:00 AM0comments
ဒေါသကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး။ ။
Posted by Myo Chit Thwe at 11/03/2010 07:09:00 PM0comments
ခရစ်ယာန်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က မင်းတို့ယေရှုက ထာဝရဘုရားကို မကိုးကွယ်သူမှန်သမျှ ငရဲကိုပို့တယ်ဆိုဟု ဆွမေးလေး မေးလိုက်သည်ဆို၏။ ခရစ်ယာန်ကျောင်းသားကလည်း ဘယ်ငြိမ်နေမလဲ၊ ပြန်ပြောတာပေါ့။ မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်း မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဆို ငရဲကိုပို့တာပါပဲ ဟု ဆိုသတတ်။ ဒီမှာတင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စကား ပြတ်သွားသည်ဆိုပါတော့။ ဒီမှာ ဘာတွေ့ရသလဲဆိုတော့ ခရစ်ယာန်ကောင်လေးသာမက ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်လေးလည်း မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကို နားမလည်ကြတာပါပဲ။ သူတို့နားလည်းထားကြတာက ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာမှအပ တစ်ခြားဘာသာဝင်တွေအကုန်လုံး ပါသွားတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘက်က မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ရင် ထာဝရဘုရားမကိုးကွယ်တဲ့သူ အကုန်လုံးပါသွားတယ်။
တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဟာ သူ့မကိုးကွယ်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပဲလို့မပြောခဲ့သလို တစ်ခြားဘာသာကနေ မိမိဘာသာဆီသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ယုံကြည့်ဆည်းကပ်လာသူတွေကိုလည်း အရင်ကကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မြဲဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးဆရာကြီးတွေကိုလည်း ၀တ်မပျက် ဆက်လက်ဆည်းကပ်ကြဖို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ ကာလာမသုတ်နဲ့ ၀ီမံသသုတ်မှာလည်း သူ့ကိုတောင် မစူးစမ်းမဆင်ခြင်၊ ပညာနဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုမပြုဘဲ မကိုးကွယ်ကြဖို့ လူတွေကို သတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ တစ်နေရာမှလည်း လူတစ်ယောက်က (ပုဏ္ဏားမျိုးနွယ်ပဲထင်ပါတယ်) ဗုဒ္ဓဆီကိုလာပြီး ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့တရားစကားကို လေးစားလိုက်နာသင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါ ဗုဒ္ဓက အပြစ်ကင်းတဲ့ ပညာရှိတွေချီးကျူးတဲ့ ကုသိုလ်ကိုပွားများစေတဲ့ ပြီးတော့လိုက်နာသူရဲ့ လောကီ၊လောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးစီပွားကို ဖြစ်ထွန်းစေတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားကို လေးစားလိုက်နာဆည်းကပ်ပါလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီတော့ အဲဒီပုဏ္ဏားက ဒီနေ့ကစပြီးတပည့်တော် အရှင်ဘုရားရဲ့တရားစကားကိုပဲ လေးစားလိုက်နာပါတော့မယ်ဘုရားလို့ ဗုဒ္ဓကိုလျှောက်တော့၊ ဗုဒ္ဓကဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။ ဟဟ ငါ့ကောင်ရ ငါက ငါနဲ့ငါ့တရားကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်လိုက်နာဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟ ဒီလိုဒီလိုသဘောတွေရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားကို လေးစားလိုက်နာဖို့ပြောတာဆိုပြီး အထက်ကပြခဲ့ တရားသဘောကိုပဲ ပြန်ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာလည်း ဒီပုဂ္ဂိုလ်က မရဘူး။ ဒီနေ့ကစပြီး အရှင်ဘုရားရဲ့တရားကိုပဲ လိုက်နာကျင့်ကြံပါမယ်ချည်းလုပ်နေလို့ ဗုဒ္ဓကမနည်းကိုပဲ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်ပြီးရှင်းပြလိုက်ရပါတယ်။ အော်…. ဗုဒ္ဓဟာ တော်တော်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားဆိုပြီး တော်တော်လေးကို ကြည်ညိုပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်။ တစ်ခါလာသေးတယ်၊ ၀ိနည်းမဟာဝါမှာထင်တယ်၊ ဗုဒ္ဓကရဟန်းတွေကိုပြောတယ်၊ ရဟန်းတို့တဲ့ မင်းတို့ ငါနဲ့ငါ့တရားတွေကို (ရဟန္တာမပါ) ရင်ထဲအသည်းထဲက စွဲလမ်းမြတ်နိုးကြတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ အဲဒီတော့ တစ်ခြားသောအယူရှိသူတွေက (ဒီနေရာမှာ တစ်ခြားသောအယူရှိသူဆိုတာ ဘာသာခြားတွေကိုပြောတာ။ သူတို့ကို ပါဠိလို တိတ္ထိလို့ခေါ်တယ်၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလို့မခေါ်ဘူး၊ ဗုဒ္ဓက မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေသာ ငရဲရောက်နိုင်တယ်လို့ဟောတယ်။ တိတ္ထိတွေ ငရဲရောက်နိုင်တယ်လို့ မဟောခဲ့ဘူး။ ဒီတော့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိသူတွေဟာ ဘာသာခြားတွေထဲကဖြစ်နိုင်သလို၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲကလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။) နောက်တော့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကို သေသေချာချာရှင်းပြပါဦးမယ်။ အခုတော့ စောစောက စကားကိုဆက်လိုက်ရင်။ ဘာသာခြားတွေက ငါ့ကိုအပြစ်ပြောကြမယ်၊ ငါ့မကောင်းကြောင်းတွေကို ချွတ်ယွင်းသဖြင့် စွပ်စွဲပြောဆိုကြမယ်၊ ရှုတ်ချကြမယ်၊ ကဲ့ရဲ့ကြမယ်။ အဲဒီအခါမင်းတို့မှာ ဒေါသတွေ၊ မကြေမချမ်းဖြစ်မှုတွေ၊ ၀မ်းနည်းမှုတွေ၊ စိုးရမ်မှုတွေ၊ ကြေကွဲခံစားမှုတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲ…. အဲဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင် အဲဒီ ဒေါသ အစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေက မင်းတို့ကိုပဲဖျက်စီးလိမ့်မယ်၊ အဲဒါကြောင့် ဘယ်သူတွေငါ့ကို ဘာပြောပြော မင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ သည်းခံခွင့်လွှတ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်လို့ ဟောတော်မူခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓက နတ္ထလောကံ အနိန္ဒိတော တဲ့၊ လောကမှာ အကဲ့ရဲ့လွတ်တဲ့သူ မရှိဘူးလို့ လည်းပြောခဲ့သေးတယ်။ အဲဒီတော့ သူများတွေ ကိုယ့်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်မြတ်နိုးကိုးကွယ်ရတဲ့ ဗုဒ္ဓအပါအ၀င် သံဃာစစ်သံဃာမှန်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချကြရင် အဲဒါကြီးကိုကိုယ်က ခံယူကြေကွဲနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပဲစိတ်ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်ရမှာပေါ့။ သူများတွေ ဘာတွေပဲပြောနေပြောနေ ကိုယ်ကတော့ သန့်စင်ခိုင်မာတဲ့ သဒ္ဓါစိတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်သည်းခံနိုင်ရမယ်။ အဲဒါဟာ ဖုဋ္ဌဿလောကဓမ္မေဟိ စိတ္တံယဿ နကမ္ပတိ၊ အသောကံ ၀ိရဇံခေမံ၊ ဆိုတဲ့ မင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ ပြည့်စုံခြင်းပဲလို့ ဆိုချင်တယ်။ တော်တော်လေးကို ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ တရားတော်တွေပဲ၊ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုး ဘယ်လိုဦးနှောက်မျိုးတွေနဲ့များ ဟောခဲ့တာတုန်းဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကို တော်တော်လေး အံ့သြကြည်ညိုဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီလိုတရားသဘောမျိုးတွေ တစ်ခြားဘယ်ဘာသာမှာမှ မရှိပဲကိုး။
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူမှားမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို ဆက်ရေးချင်ပါသေးတယ်။
Posted by Myo Chit Thwe at 10/11/2010 02:26:00 PM0comments
ဗုဒ္ဓ (သို့မဟုတ်) မှားတဲ့ဘက်ကလူ
ရောင်စုံတွေနဲ့ ထင်ရာစိုင်းတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ
ဘုကျကျ သူပုန်တစ်ယောက်ပါ။ ။
Posted by Myo Chit Thwe at 10/10/2010 07:29:00 PM0comments
ငါဟာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ မောဟိုက်လို့
အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် သမာပတ်တွေ
ရိုးသားတဲ့ အနံ့အသက်မဲ့ လေပြေလေးကို
Posted by Myo Chit Thwe at 6/28/2010 06:01:00 PM0comments
Posted by Myo Chit Thwe at 6/25/2010 05:04:00 PM0comments
မင့်ရင်ခုန်သံတွေ ထုံထိုင်းစွံ့အ ကုန်ပြီပေါ့
ကြည့်မနေနဲ့ကွာ အဲဒါ မာယာတွေ
ဒို့ကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် လုပ်နေကြတာ
ဒီကမ္ဘာကြီးကို ငါတို့ငဲ့ကွက်နေစရာ မလိုဘူး။
အသိတရားတွေ အပြစ်ကင်းကင်းနဲ့ ဆင်းရဲနေချိန်မှာ
ဟောဒီကမ္ဘာကြီးက ငါတို့ကို ချမ်းသာမပေးခဲ့ဘူး
နောက်တစ်ခါ စင်ကြယ်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူးကွ
ခံတွင်းပျက်တယ်၊ ရေငတ်တယ်၊ ရင်ခါးတယ်
မင်းရင်ထဲက ကြိမ်နှုန်းမဲ့ အီးစီဂျီကို
ငါ မခံစားနိုင်တော့ဘူးကွာ။ ။
Posted by Myo Chit Thwe at 6/21/2010 12:35:00 PM0comments
သာသနာ့ ကျက်သရေဆောင် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များ
Myo Chit Thwe
'မျိုးချစ်သွေး' ဆိုတာ ရဟန်းတစ်ပါးရဲ့ဘွဲ့အမည်ပါ။ 'မေတ္တာဝံသ' ဆိုတဲ့ပါဠိအမည်ကို လိုရာဆွဲပြီး ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်လိုက်ရင် 'မျိုးချစ်သွေး' ရယ်လို့ မြန်မာအမည်ရပါတယ်။ 'မေတ္တာ' ဆိုတာ ချစ်တာကိုပြောတာ။ '၀ံသ' ဆိုတာ အမျိုး၊ အမျိုးဆိုတာ သွေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲလေ။ ဒီလိုနဲ့ 'မျိုးချစ်သွေး' ဆိုပြီး မြန်မာမှု ဘွဲ့အမည် ဖြစ်လာတယ်ဆိုပါတော့။ ဦးဇင်းဘ၀ကတော့ ကာရံမိပြီး ကဗျာဆန်တယ်လို့ ပြောရမလား၊ စည်းချက်မမှန် ပရမ်းပတာဆန် တယ်လို့ပြောရမလား။ ဦးဇင်းက မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာ မွေးတယ်။ ရွာလေးတစ်ရွာမှာ ကြီးပြင်းတယ်။ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ရွာမှာ မူလတန်းနဲ့ အလယ်တန်း ပညာကို သင်ယူခဲ့တယ်။ မွေးဖွားခဲ့တဲ့မြို့မှာ အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်းပညာကို သင်ယူခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဘွဲ့တွင်းအဆင့်ပညာကို သင်ယူခဲ့တယ်။ အခုတော့ သူများနိုင်ငံမှာ ဘွဲ့လွန်အဆင့် ပညာကို သင်ယူနေတယ်။ အသက်က လူဝတ်သက် ၁၂ နှစ်၊ သင်္ကန်းဝတ်သက် ၁၂ နှစ်၊ စုစုပေါင်း ၂၄ နှစ်။ ဦးဇင်းရဲ့ဘ၀အမြင်ကတော့ ပညာတတ်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချလေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချလေ၊ စိတ်ဓာတ် မြင့်မြတ်လေ။ ဒီဘလော့(ဂ်) ထဲမှာ ပရဟိတအတွက် ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက် တွေပါသလို ပုဂ္ဂလိကအတွက် အတ္တခံစားချက်တွေလည်းပါတယ်။ ဦးဇင်းရဲ့ စိတ်နေသဘောထားက တခါတရံ တည်ကြည်လေးနက်တယ်၊ တခါတရံ ပြောင်တတ်ပြက်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာကိုတော့ သွေးနဲ့ရင်းပြီး ချစ်မြတ်နိုးတယ်။ ဒါကတော့ မျိုးချစ်သွေးရဲ့ ဘ၀အချုပ်နဲ့ ဆန္ဒသရုပ်ပဲဖြစ်တယ်။
friends sharing with...
မြန်မာ လူငယ်များအတွက် ပညာရေး
poemlike text (1)
ဗုဒ္ဓ၏ အကြံပြုချက်များ (1)
တစ်စုံတစ်ခု အတွက် တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရာ တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းကြောင့် တစ်စုံတစ်ခုသော အကျိုးကို ရ၏။